RASMI: Laacibka ku guuleystay abaal-marinta xiddiga bisha September ugu fiicnaa kooxda Real Madrid oo la shaaciyey – Gool FM
(Madrid) 07 Okt 2020. Kooxda Real Madrid ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday maanta oo Arbaco ah laacibka ku guuleystay abaal-marinta xiddiga bisha September ugu fiicnaa Los Blancos.
Goolhayaha reer Belguim ee Thibaut Courtois ayaa ku guulaystay abaal-marinta ciyaaryahanka ugu fiicnaa kooxda Real Madrid bisha September ee la soo dhaafay, kaddib bandhigiisii weynaa uu sameeyay.
Thibaut Courtois ayaa si fiican kaga soo muuqday Real Madrid inkasta oo bilowgii xilli ciyaareedka ay jireen xaalado aan caadi ahayn sababo la xiriira faafitaanka caabuqa Korona Fayras.
Real Madrid ayaa ciyaartay 3 kulan bishii September, iyada oo badisay laba kulan oo ay la ciyaartay Real Valladolid iyo Real Betis, halka kulankii ugu horeeyay ee Real Sociedad ay ku kala baxeen barbadrdhac.
Thibaut Courtois ayaa ku guuleystay inuu shabaqiisa ilaashado kulamadii Real Sociedad iyo Real Valladolid ee bishii hore, ka hor inta uusan sidoo kale ku guuleysan maalmo yar ka hor inuu shabaqiisa ilaashado kulankii Levante.
Depay oo si qiiro leh kaga hadlay fashilka ku yimid heshiiskii uu ugu biiri lahaa kooxda Barcelona